Shidaalka ay Kenya dhoofineyso masii socon karaa? | Biyoguurenews.com
Home Wararka Shidaalka ay Kenya dhoofineyso masii socon karaa?
Shidaalka ay Kenya dhoofineyso masii socon karaa?
Maanta waxay maalin taariikhi ah u tahay Kenya, ka dib markii waddanka uu markii ugu horreysay dhoofiyay shidaal uu soo saaray.
Tallaabadan oo uu goob joog ka ahaa madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa ahayd mid lagu tijaabinayo ganacsiga dhoofinta shidaalka ee ay Kenya dooneyso inay si rasmi ah u billowdo sanadka 2024-ka.
Shirkad laga leeyahay Shiinaha, oo uu fadhigeedu yahay dalka Ingiriiska ayaa ku guuleystay qandaraaskan, waxaana maanta la dhoofiyay shidaal dhan 240,000 barmiil.
Xukumadda Nairobi ayaa fileysa inay labada sano ee soo socota shidaalkan ka hesho lacag dhan $84 malyan oo doolar.
Waxaa la qiyaasay in keydka shidaalka ee Kenya ku jira uu gaarayo ilaa 560 malyan o barmiil.
Khubarada ayaa sheegaya in marka la gaaro sanadka 2022-ka uu waddanka Kenya maalin walba soo saari karo shidaal xaddigiisu dhan yahay 100,000 oo barmiil.
Mashruucan ayaa loo arkaa mid muhiim ah oo Kenya u horseedi kara dhaqaale fara badan, balse xaddiga shidaalka ee uu dhoofinayo waddankan ku yaalla bariga Afrika ayaa aad u yar marka la barbar dhigo waddamada saliidda qaniga ku ah.
Hadaba muhimaadda uu leeyahay shidaalka ay maanta dhoofintiisa billowday Kenya ayaa waxaan ka waraysanay Dr Xasan Cali Xuseen oo ka tirsan shaqaalaha shirkadda shidaalka Sacuudiga ee Aramco.
Dr Xasan ayaa sheegay in shidaalkan uu wax weyn u tarayo Kenya, dhaqaale ahaanna uu sare u qaadayo waddanka, balse uusan muddo dheer sii socon karin.
“Kenya waxay dhoofinta shidaalkan maanta ku billowday 240,000 oo foosto, oo waliba ceyriin ah, taasina micnaheedu waa inaysan kaalin weyn ka gali karin dalalka saliidda dhoofiya. Shirkadda qiimeysay shidaalkan waxay sheegtay in dhulka Turkana uu ku jiro shidaal dhan 560 malyan oo foosto, marka la gaaro 2022-ka haddii la dhiso dhuumaha shidaalka waxay Kenya dhoofin doontaa 100,000 oo barmiil maalintiiba, sidaas awgeed muddo gaaban ayuu ku dhammaanayaa shidaalka laga helay Turkana”.
Wuxuu sheegay in ay jiraan waddamo kale oo sidaasoo kale shidaal aan badneyd horay ugu dhoofiyay caalamka, markii dmabena ay howshoodu “iska soo afjarantay”.
“Arrin aad u weyn ma aha, waayo Suudaan ayaa hadda kahor shidaal sidaas u yar soo saartay, waxayna dalalka sidaasoo kale ah dhoofin jireen 100,000 ilaa 200,000 oo foosto maalintiiba, laakiin dalka Sacuudiga ee aan hadda ku noolahay, shirkadda aan ka shaqeeyo ee Aramco maalintii waxay soo saartaa in ka badan 10 malyan oo foosto, marka waddamada OPEC ee saliidda dhoofiya waxay ka hadlaan malaayiin barmiil maalin kasta, Kenya waxeedana wax badan ma aha”, ayuu yiri Dr Xasan.
Shidaalka maanta la dhoofiyay ayaa laga soo qaaday gobolka waqooyiga-galbeed ku yaalla ee Turkana, waxaana lagu safriyay masaafe dhulka ah oo dhan 850 kiiloo mitir, si loo gaarsiiyo dakadda magaalada Mombasa.
Kenya ayaan waqti xaadirkan lahayn dhuumo shidaalka qaada oo dhulka hoostiisa mara.
Qorshe ay Kenya ku damcsaneyd inay dhuumo shidaal ku sameysato iyadoo kaashaneysa Uganda ayaa guul darreystay ka dib markii xukuumadda Kampala ay heshiis noocaas ah la gashay waddanka Tanzania.
Previous articleMadaarka Hargeysa Oo Maanta Laga Ceydhiyey Shaqaale Ka Badan 40 Qof Iyo Sababta
Next articleDaawo, Madaxwayne Siyaasadii Debada Ka kaalay Tii Gudaha wa Lagu Fashilmay, Caarena , Sheekh saleeban Sicii